Blackjack Free 1.4.4 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.4.4 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား ကာစီႏို Blackjack Free
Blackjack Free ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
♠ Google Play Leaderboard – compete with players around the world!
♠ Google Play Achievements – test your skills and get the badges!
♠ Two seats to play two hands atatime
♠ Authentic Blackjack rules
Blackjack အခမဲ့သင် Las Vegas မှာကစားတူခံစားစေမည်တဲ့ Single-player ကို, အော့ဖ်လိုင်းဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ကိုယ်ပိုင်အရှိန်အဟုန်မှာ play - အဆောတလျင်မလိုပါပဲ!
♠ Google ကအမှတ်သင်ပုန်း Play - ကမ္ဘာတဝှမ်းကစားသမားတွေနဲ့ယှဉ်ပြိုင်!
♠ Google ကအောင်မြင်မှုများ Play - သင့်ကျွမ်းကျင်မှုစမ်းသပ်ရန်နှင့်တံဆိပ်များရ!
♠စစ်မှန်သော Blackjack စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို
Blackjack အခမဲ့, အွန်လိုင်း, သာဖျော်ဖြေရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အခွင့်အလမ်းများနှင့်ကျွမ်းကျင်မှု၏ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုဂိမ်းကစားခြင်းအားဖြင့်ကြင်နာအတွက်အမှန်တကယ်ငွေ, စစ်မှန်သောပစ္စည်းများကို / န်ဆောင်မှု / လက်ဆောင်များသို့မဟုတ်ကုန်ပစ္စည်းများအနိုင်ရမဖြစ်နိုင်ပါ။ ဒီဂိမ်းအတွက်အသုံးပြုက virtual ငွေကြေး Chips ဟုခေါ်ကြသည်နှင့်အစစ်အမှန်ပိုက်ဆံသုံးပြီးအားဖြင့် '' Store က '၌ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ chips ငွေသားအဘို့ဖလှယ်မရနိုင်သို့မဟုတ်မည်သည့်ပုံစံထွက်ပေးဆောင်ရမည်သာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းကစားရန်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Blackjack တဆယ်ရှစ်နှစ်ပတ်လုံးသို့မဟုတ်ကျော်ဖြစ်သောလူကြီးပရိသတ်အတွက်တစ်ခုတည်းကိုသာရည်ရွယ်သည်။
Service ၏စည်းမျဉ်းများ: http://www.abzorbagames.com/terms-of-service
Blackjack Free အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Blackjack Free အား အခ်က္ျပပါ
cramik စတိုး3727
Blackjack Free ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Blackjack Free အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.4.4
ထုတ်လုပ်သူ AbZorba Games BetriebsgmbH
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.abzorbagames.com/privacy-policy
App Name: Blackjack Free
Release date: 2019-07-12 11:30:27
လက်မှတ် SHA1: A0:09:ED:43:0F:CB:FC:7F:9F:3B:F3:84:51:7C:84:3D:95:E8:0C:24
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Manos Moschous
အဖွဲ့အစည်း (O): MVNS
နယ်မြေ (L): Athens
နိုင်ငံ (C): GR
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): Greece
Blackjack Free APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ